Madaxda Galmudug oo ku kala qeybsan shirkii uu ku baaqay Madaxweyne Farmaajo • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Galmudug / Madaxda Galmudug oo ku kala qeybsan shirkii uu ku baaqay Madaxweyne Farmaajo
Madaxda Galmudug oo ku kala qeybsan shirkii uu ku baaqay Madaxweyne Farmaajo
October 30, 2018 - By: Abdirisak Faamoos
Warsaxaafadeed xalay kasoo baxay xafiiska madaxa xukuumada Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa lagu taageeray shirkii wadatashiga ee uu markale ku baaqay madaxweyne Farmaajo.
Warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dowlad goboleedka Galmudug uu soo dhaweynayo shirkii uu ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo Si loo dhameeyo khilaafka soo kala dhex galay madaxda dowlada federaalka iyo dowlad goboleedyada.
Dowlad goboleedka Galmudug waxa uu ugu baaqayaa madaxda dowlada dhexe iyo dowlad goboleedyada in wadahadal ku dhameeyaan khilaafaadka soo kala dhex galay labada dhinac una turaan shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka.
Sidoo kale warsaxafaadeedka ayaa lagu sheegay in Galmudug ay aqoonsan tahay jiritaanka dowlada Federaalka iyo madaxdeeda taasoo kamid ah qodobada ugu waa weynaa ee ku xusnaa warsaxaafadeedka kasoo baxay madaxa xukuumada Galmudug maadama khilaaf uu weli dhex yaalo madaxweynaha Galmudug iyo DF.
War saxaafadeedkan ayaa kusoo beegmay xili madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf uu shacabka ku dhaqan magaalada Dhuusomareeb ugu baaqay in ay u diyaargaroobaan shirweyne wadatashi ah kaasoo ay horey u go’aamiyeen madaxda maamul goboleedyada waxaana Xaaf oo shalay dib ugu laabtay Dhuusomareeb uu sheegay in xarunta Galmudug ay noqon doonto mid looga tashado aayaha dadka Soomaaliyeed sida uu xusay Xaaf.
Dadka siyaasada indho indheeya ayaa sheegaya in kala aragti duwaansho siyaasadeed uu xiligan u dhexeeyo madaxda ugu sareysa Galmudug marka la eego warsaxaafadeedka dabacsan ee xalay kasoo baxay madaxa xukuumada iyo mowqifka madaxda ku midowday golaha iskaashiga dowlad goboleedyada ay weli ka taagan yihiin khilaafka iyaga iyo dowlada federaalka.